SOSCENSA | Annaga
Halkaan ayaad timid: Home » In Somali » Annaga
SOSCENSA waxaa laga soo gaabshay ka qeybqaateyaasha aan dowliga ahayn ee Koofurta/Bartamaha Soomaaliya
SOSCENSA waxaa ujeedadoodu tahay xoojnta Kaqeybqaateyaasha aan Dowliga ahayn ee marka magacooda la soo gaabsho loo yaqaano (NSAs) kana jira gobalada Koofurta/Bartamaha Soomaaliya si markaasi ay ugu howlaan siyaasada wada hadalka gudaha iyo tan caalamiga ah iyo dajinta go,aamada si dabadeed loogu helo dadka Soomaaliyeed mustaqbal bad qaba oo nabadi ay ku dheehan tahay. Waxaanu ku hadalnaa magaca Soomaali weyn marka laga hadlayo arimaha dhimida faqriga, horumarka, maamul wanaaga, demoqraadiyada, nabadda iyo amniga.
Maadama aysan jirin dowlad shaqeyneysa, Soomaalidu waxa ay heli karaan oo qura waa fursado yar oo ay si toos ah saamayn ugu yeelan karaan go,aamada siyaasadeed ee gudaha iyo dibada ee saameynta ku yeesha mustaqbalkooda. Waxaa jira fakir ay qabaan qaar badan oo Soomaalida kamid ah kaasoo sheegaya in go,aamo badan oo noloshooda saameyn kuyeesha ay gaaraan beesha caalamka ayada oo dadka wadanka lehna aan aad loola tashan. Arintan ayaa waxay iyana saamaysaa wax ku oolnimada barnaamijyada gargaarka. Waxay sidoo kale hoos u dhigtaa bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed, waxayna ka mid noqotaa sababaha keena in bulshooyinka Soomaaliyeed aysan ka qeybqaadan dajinta go,aamada.
SOSCENSA waxaa la hirgaliyay bishii Maarso ee sanadkii 2008 si loo hubiyo in dowladu maqasho codka dadka Soomaalida ah ee caadiga ah. Sidoo kale waxaa la doonayaa in la hubiyo in codkooda laga maqlo macaahiida caalamiga ah ee masuulka ka ah siyaasada Soomaaliya. Waxaanu guddi iyo fagaare muhiim ahba siinaa ka qeybqaateyaasha aan dowliga ahayn ee magacooda loo soo gaabsho (NSAs) si dabadeed ay u sharaxaan aragtida iyo waxa ay danaynayaan dadweynaha Soomaaliyeed.
Ujeedooyinka ugu waaweyn ee SOSCENSA waxaa ka mid ah:
A. Qadarinta qiyamka Islaamka iyo dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaaliyeed.
B. Sare u qaadida wada hadalka iyo iskaashiga ka dhexeeya ka qeybqaateyaasha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn ayada oo arintaasi loo sii marayo fagaareyaal wada hadal oo maxali ah, kuwo goboleed, kuwo qaran iyo kuwo caalami ah intaba.
C. Ku baraarujinta iyo kala talinta ka qeybqaateaasha aan dowliga ahayn arimaha la xiriira iskaashiga iyo horumarka sida wax ku oolka ah looga faaiideysanayo iskaashiga EC/ACP.
D. Ballaarinta iyo dhowrida qiyamka ay ka qaybgaleyaasha aan dowliga ahayn kunoqonayaan wakiilo isbadal oo wax ku ool ah.
E. Sare u qaadida waxa ay ka kooban yihiin awoodaha wax lagu fahmo, rasmiyaynta iyo wax ka badalida siyaasadaha loogu tala galay nabad waarta, dimoqraadiyad iyo xuquuqul insaan.
F. Isku xirida howlaha iyo barnaamijyada ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn ee ka jira Koofurta iyo Bartahama Soomaaliya.
G. Isu keenida wakiilada NSAs’ si ay u wada hadlaan oo isu weydaarsadaan xogta iyo waaya aragnimada.
H. Soo ban dhigida fikradaha ka qeybgaleyaasha aa dowliga ahayn iyo kala tashiga dadka dajiya go,aamada baraarujinta iskaashiga muhiimka ah ee lala leeyahay Guddiga Midowga Yurub (EC) iyo deeq bixiyeyaasha kale.
I. Ka shaqeynta istaraatiijiyadaha ka caawiya ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn dhanka horumarinta xaaladaha nolosha bulshooyinka gobolka ama sidii ay ku heli lahaayeen adeegyada bulshada ayagoo ka qeyb qaadanaya howlaha iyo baaqyada soo jeedinta aaraada la xiriirta hirgalinta mashaariicda/barnaamijyada.
J. Ka qeb galinta ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn horumarinta istaraatiijiyadaha qaranka ee loogu tala galay nabadda, soo kabashada iyo horumarka (sida ku cad Warqada Istaraatiijiyada Wadanka).
K. Gacan ka geysashada wax tar gar gaar oo intii hore ka weyn.
L. Xiriirinta iyo fududeynta wada hadalka ka dhexeeya ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn (NSAs) iyo u dhigida meeqaamyadooda iyo ahmiyadahooda sidii talo bixin loogu tala galay dadka dajiya siyaasadaha.
Ururada aan la shaqeyno
Waxaanu la shaqeynaa ururada nala jaalka ah sida:
Ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn ee Somaliland (SONSAF)
Ururka ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn ee Puntland (PUNSAA)
Waxaanu taageero farsamo ka helnaa:
Taageero lacageedna waxaanu ka helnaa:
SOSCENSA waa aalad ay ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn ee kusugan Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya u adeegsadaan ku howlida siyaasada wada hadalka gudaha iyo dibada ee ku hareereysan arimaha muhiimka u ah ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn.
SOSCENSA wuxuu rumeysan yahay ka qeyb qaadasho intii hore ka badan oo laga qeyb qaadanayo faagaraha si wax looga badalo siyaasada Soomaaliya heer qaran iyo heer caalami si loogu guuleysto nabad , wanaag, iyo barwaaqo ka dhex dhalata bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Qeexida Hadafka SOSCENSA
SOSCENSA waa fagaare ka kooban qeybo fara badan oo aan dhinacna u janjeerin kaasoo ka jira Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya kana shaqeynaya sidii loo fududeyn lahaa siyaasada wadahadal ee diirada lugu saarayo sidii lugu hubin lahaa in aragtiyada iyo mudnaanta ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn iyo bulshooyinka maxaliga ah ee wadanka ka shaqeynaya ay wax uga badali lahaayeen hannaanka lagu dejiyo siyaasadaha gudaha iyo dibada ee muhiimka u ah nolosha iyo wanaaga dadka Soomaaliyeed.
Guddiga Guddiyada waxaa loo kala qeybiyay shan guddi-hoosaadyo oo kala ah:
Guddiga Maaliyada iyo Xisaabxirka
Guddiga Qalqaalada iyo Udoodida
Guddiga Horumarinta Adeegyada Bulshada
Guddiga Dhisida Nabadda iyo Xallinta Khilaafka
Guddiga Dhisida Awooda iyo Horumarka